Ekpere ịgọzi nri. ? [na nri nye Chineke]
Ekpere ịgọzi nri Ọ bụ ọdịnala na-adịgide ruo taa na ezinaụlọ niile.
Ọ bụ akụkụ nke ọzụzụ ụmụaka ma bụrụkwa ihe a na-etinyere ya n’ime ụlọ akwụkwọ dịka izi ihe.
Mkpa ọ dị n’ime ekpere a bụ ị nwe ekele, n’ịyị etu nri anyị ga-eri na ịrịọ maka ndị na-enweghị ya.
Ọ bụ ihe ngosi nye ekele nye Chukwu onye bụ onye n’enye anyị ike ịga ọrụ, ịzụta nri, nye anyị amamihe iji dozie ha na ngọzi nke inwe ezi na ụlọ iji soro ha.
N'okwu ebe enweghị ezinụlọ nọ na tebụl, anyị ka ga-enwe ekele maka na enwere ndị na - enweghị ike iri nri, nke a abụghị n'ihi na ha enweghị, mana n'ihi na ha enweghị ike maka ahụike ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ, nke a ga - eme ka anyị nwee obi ekele na otu Otu mmegharị aka nke na-egosi nke a bụ ikpe obere ekpere tupu i rie nri.
1 Ekpere ịgọzi nri O siri ike?
1.1 Ekpere ịgọzi nri
1.2 Ekpere ka inye ekele maka nri
1.3 Ekpere nri
2 Ka m kpee ekpere niile?
Ekpere ịgọzi nri O siri ike?
Ekpere niile na-adị ike ma ọ bụrụhaala na ha na-eme ikwere n'ike ha.
Ngọzi nri bụ omume nke okwukwe nke anyị na-ekele ọ bụghị naanị na anyị na-arịọ maka nri ka ọ daa nke ọma na ahụ anyị, iwepụta nri, ka ha kwụsị ịkwụsị ịnọ na tebụl anyị ma nye anyị uru nke nri ahụ. Weta nke ọ bụla n’ime ha.
N'aka nke ya, anyị nwekwara ike ịrịọ maka ndị nọ n'ụkọ ma enweghị nri na tebụl ha, nke nwere ike iri obere ọtịta nri, anyị na-arịọ maka ndị na-enweghị inye ụmụ ha, maka ndị agụụ na-agụ na enweghị. ihe eji eme ya.
Ekpere ịgọzi nri na nri siri ike ebe enwere okwukwe.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụghị naanị inye ekele maka nri, ọ bụ omume nke okwukwe na ịhụnanya maka ndị ọzọ ebe anyị tinyere onwe anyị n'ọnọdụ nke ọzọ wee jụọ maka mkpa ha.
Mgbe emere ka ekpere mata na achoro nke ozo ma anyi rio aririo anyi, anyi na egosiputa ihunanya nke Chineke na ndu anyi.
Onye-nwe-ayi Chineke; mgbasa ozi nke mere na na tebụl a, enwere mgbanwe mgbanwe n'etiti ndị ọbịa;
Gbakọọ maka nri ị nyere anyị taa ka ọ baa uru;
Ka onye na eribeghị nri Gbalịa mkpụrụ nke ihe okike gị mara mma.
Anyị hụrụ gị n'anya Chineke Nna anyị, anyị na-ekelekwa gị na enweghi ngwụcha maka ikenye gị taa.
Anyị nwere ike bido ikpe ekpere site n’inye ekele maka ohere Chineke nyere anyị ka anyị nwee ike zụọ onwe anyị nke ọma.
Mgbe ahụ anyị nwere ike ịrịọ maka onye tinyeworo nsogbu ahụ ka ọ kwadebe nri ka anyị wee rie ya, maka onye nyeere aka na usoro niile ka nri ndị a rute na tebụl anyị.
Anyi na ario ndi n’enweghi, ariokwa ka ha debe nri ubochi nile n’aka onye obula, n’ikpeazụ, anyi na-ekele ebube ozo.
Ekpere ka inye ekele maka nri
Nna di nsọ; taa anyi juo gi
Soro anyi sonyere na tebụl a ma gọzie achịcha anyị ga-atọ n’otu ntabi anya; Ọ pụtara na mkpụrụ ndị a bụ ahụike nke ahụike Anyị ahapụkwala onye na-alụ ọgụ ịta ụta.
Anyi na-ekele Gi, Onye-nwe-ayi, amara-ayi di nkenke nihi nri diri nri ndia!
Contágianos nke ihunanya gi na ihunanya pathzọ nke na-eduga anyị n'ime ụlọ gị.
Ekele bụ omume ọma nke na-egosi ole na ole taa, anyị bi n'ime ụwa nke na-aga ọsọsọ ọsọ ma ole na ole na-akwụsị inye ekele.
N’okwu Chineke, e nwere akụkọ na-akọ akụkọ banyere ụfọdụ ndị ekpenta bụ ndị Jizọs nyere ọrụ ebube nke ọgwụgwọ ma ọ bụ naanị otu onye ka na-enye ekele.
Ọtụtụ mgbe nke a na eme na ndụ anyị.
Naanị anyị na-eche banyere iri nri, inye onwe anyị nri mana ịghara inye ekele na ọ bụ ihe ga-adị mkpa na ndụ anyị.
Gozinu taa, nna m, onye m hụrụ n’anya, nye onye ọ bụla nọ na tebụl a;
Onye agọziri agọzi ka onye doziri nri bu; Gọzie onye kwere ka ha nọrọ ebe a; Gọzie, na mgbakwunye, onye zụlitere nke ọ bụla.
Nna di nkpa! Maka ịba ụba ị nyere anyị taa, anyị nwere obi ekele nke ukwuu ma nwee obi ofufe na enweghị ngwụcha maka achịcha ị debere na tebụl taa.
A na-ahụta ezigbo ihe atụ n’ekpere maka nri maka n’otu Jizọs onye Nazaret onye kelere maka nri ha riri.
Enwere ọrụ ebube dị iche iche na-eche a ekpere ịbịakwute anyị na ọrụ ebube nke nri ụbọchị nwere ike ịbụ otu n'ime ha.
N'oge ndị a dị ka o siri ike ikele ekele site n'ekpere, ihe ùgwù nke ịnwe nri anyị chọrọ bụ omume nke okwukwe na ịhụnanya nke Chineke.
Ka m kpee ekpere niile?
Naanị mgbe ị ga-ekpe ekpere ka ị gọzie nri otu ugboro tupu nri ọ bụla. Ihe ị ga - eme bụ ikpe ekpere dị iche n’oge nri.
Ọ nwere ike ịdị iche kwa ụbọchị, kwa izu, izu ma ọ bụ ọbụla kwa ọnwa.
Na-echeta mgbe niile na ihe dị mkpa bụ inwe okwukwe na Chineke Onye-nwe-anyị. Okwukwe na nkwenye bu ndabere nke ekpere obula.